OEM & ODM Ọrụ - MEOKON SENSOR TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD
Ngwọta ọrụ zuru oke services Ọrụ OEM / ODM na nkwado pụrụ iche.
● Mmepụta ngwaahịa na mmepe
Control Ikike njikwa na nnabata
● Production, n'ichepụta na nkwakọ ngwaahịa
Order emezu na mgbanwe oke nhọrọ
Nka na ụzụ nkwado
Ma na Asia，North America，Europe na mba ndị ọzọ, anyị na-enye ọrụ OEM dị mma maka ụlọ ọrụ ụwa maka ọtụtụ afọ, ma were OEM / ODM imekọ ihe ọnụ mode dị ka a isi atụmatụ nke anyị ụlọ ọrụ ogologo oge mmepe. Hazie oke ngwaahịa, aha, nkwakọ ngwaahịa, ntuziaka, nnyefe na usoro ndị ọzọ dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, wee mekwaa njikwa njikwa dị ka ihe ndị ahịa chọrọ.
Mụbawanye pọtụfoliyo ngwaahịa gị ma bulie ngwaahịa dị iche iche ị na-enye.
Nwere ike mfe kwalite ẹdude imewe ma ọ bụ chepụta ihe kpamkpam ọhụrụ ngwaahịa. Site na imepụta omenaala na mmepe mmepe anyị，ị nwere ike inye ndị ahịa gị usoro ngwaahịa siri ike, nke a pụrụ ịdabere na ya.
anyị na-enye ahaziri ngwaahịa na ọrụ iji dozie mkpa ngwa nke dịgasị iche iche ulo oru gburugburu na ndị ahịa, ịzụlite ngwaahịa kwesịrị ekwesị maka gị n'ibu akpaaka ngwá ma ọ bụ ibuo mkpa. Rute ugbu a，anyị nwere ihe karịrị 40 mba mepụtara nchọpụta Kemịkalụ na ịba uru patent patenti na dijitalụ mgbali gauges, nsogbu sensọ, ọgụgụ isi mgbali controllers, wireless sensọ, mgbali n'ihe na akara usoro，wdg.